နီလန်းကတော့ မနေ့က ကျရောက်လာတဲ့ သူမရဲ့မွေးနေ့လေးမှာ သူမရဲ့ဖန်တွေက Surprise အကြီးကြီးတိုက်လိုက်တာကြောင့် ရူးမတတ်ပျော်ရွှင်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ ကဲ ပရိသတ်ကြီးရေ ဘာ Surprise ဆိုတာ ပရိသတ်ကြီးသိကြလား။ နီလန်းကို သူမရဲ့ ဖန်တွေက ပြိုင်ကားတစ်စီးဝယ်ပေးလိုက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာအိုင်ဒေါ Season3မှာ ယခုလိုမျိုးဖန်တွေစုပေါင်းပြီး ကားဝယ်ပေးဖူးတာ နီလန်းနဲ့ဆို (၃) ယောက်မြောက်ရှိခဲ့ပါပြီ။
“အိပ်မက်လား? တကယ်လား? 😭😭Nilen မွေးနေ့လက်ဆောင်အတွက် အမာခံပရိတ်သတ်တွေရဲ့ 🎂 Birthday Surprise 🎂 😲😲 ရူးချင်တယ်တကယ် 😫😫 ပျော်လွန်းလို့ပါ 😭😭 ဘာပြောရမှန်းတောင်မသိတော့ပါဘူး 😑😑😍အားလုံးကို မပြောပြတတ်အောင် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်😍Nilen ပြိုင်ကားလေးတစ်စီးပိုင်ဆိ်ုင်ဖူးပြီ 🚗 အပျော်ဆုံးနေ့ပါ😭 God Bless You All ❤️
မွေးနေ့ဆုတောင်းပေးတဲ့သူတွေအကုန်လုံးကိုလည်း ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်ရှင့်အားလုံးကိုချစ်တယ်❤️” လို့ သူမရဲ့အကောင့်မှာေ၇းသားဖော်ပြထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။
ရွှေတိဂုံဘုရားမှာ ကုသိုလ်ယူရင်း မင်းစိန် အတွက်အမျှပေးဝေလိုက်တဲ့ မင်းဦး
ပရိသတ်တွေရဲ့မျက်စိရှေ့မှာတင် အသက် (၂၃) နှစ်ပြည့်သွားပြီဖြစ်တဲ့ သရုပ်ဆောင် ဟဲဗီးဖြိုး
စည်ပင်ရွေးကောက်ပွဲအတွက် မကျေပွဲပြန်နွှဲမယ့် ဇောတိကခင်လှိုင်